Mechanical Seal Ceramics China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mechanical Seal Ceramics - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Mechanical Seal Ceramics)
Ukupakisha: Ukupakisha komuntu ngamunye kuqala, bese kukhishwa ikhibhodi elandisiwe
I-High-Pressure Mechanical SSiC Seal Ceramic Ring I-silicon carbide ihlala emndenini owodwa we-ceramic, kodwa ubuso be-SiC uphawu lwe-ceramic bunobulukhuni obungcono kakhulu kanye ne-lubrication kune-aluminium oxide (i-Alumina). Kunezinhlobo ezimbili ze-silicon carbide, enye i-silicon carbide (SSiC) enamathela...
I-Industrial Mirror I-Alumina Ceramic Seal Discs Pols
Amandla Wokunikezela: 10,000,000 sets/month
Ngomsebenzi wethu wokukhiqiza we-veteran kanye nenzuzo yobuchwephesha yobuchwepheshe obunjiniyela, wonke ama-disk seal we-ceramic esiwunikezile anesimo esingavamile sokusakaza, ubunzima be-diamond. Banikeza nokuphikisana okumangalisayo kwamakhemikhali ngokumelene ne-acids nezimo ze-alkaline. Futhi lezi zakhiwo zigcina...
I-High Precision Zirconia Sensor Ceramics For Automation
Ngezici ezikhethekile ze-zirconium oxide ceramics, izingxenye ze-zirconia ze-ceramic zivame ukusetshenziselwa izinzwa zokuzenzekelayo. Ithuthukisa ukusebenza kwesikhathi sokusebenza, kunciphisa izindleko zokugcina. Sinomshini ophelele wezinto zokukhiqiza, okubandakanya ukulungiswa kwempahla eluhlaza, ukwakha, ukususa,...
I-Zirconia Ceramic Seal Ring ye-Technology yokuPhepha
I-Zirconia seal ring ye-ceramic seal yokufaka uphawu lwe-tealing technology iyinxenye eyinhloko yazo zonke izimpompi zemishini yasendlini nemishini kagesi. Idlala indima eqondile yoketshezi, uketshezi lokufaka uphawu lokufakelwa kwamafutha nokusebenza isikhathi eside. Izakhiwo ezinhle kakhulu ze-zirconium oxide...
Amandla Wokunikezela: 2,000,000pcs/month
Metallized Alumina Ceramics for Electrical Components I-ceramics yensimbi yobuchwepheshe isetshenziselwa kabanzi kwizicelo zikagesi nezimboni, njenge-electron tubes, amashubhu wegridi yamandla, ama-thyristors ahlanzekile, i-gas triode nokunye. Ukuze kufinyeleleke nge-ceramic kwensimbi ejoyina kulezi zixhobo zikagesi...
I-Metallized Ceramics yamadivayisi kagesi kanye nama-Electronic
Amandla Wokunikezela: 200,000pcs/month
I-Metallized Ceramics yamadivayisi kagesi kanye nama-Electronic Iphesenti eliphezulu, i-high-purity aluminum i-ceramics, i-zirconium oxide ceramics ne-beryllia isetshenziselwa njengento eyigugu yomzimba we-ceramic. Ngenxa yokuthi lezi zici ze-technical ceramics zibhekene nezakhiwo zazo ezivelele ngokuphathelene...
I-Refractory Metallized Alumina Ceramics yangokwezifiso
Amandla Wokunikezela: 100,000pcs/month
I-Refractory Metallized Alumina Ceramics yangokwezifiso Sinikeza izinhlobonhlobo ze-alumina ceramics ezinamathemikhali ezinhlobonhlobo ezisetshenziselwa ukusetshenziselwa ukuphazamiseka kwe-vacuum, amashubhu wegridi yamandla, amashubhu we-x-ray kanye nezicelo ezifanayo lapho kuhlanganiswa khona ama-ceramic-to-metal,...
I-Ceramics ye-Metallized Customized for Applications Electronic
I-ceramics zensimbi eyenziwe ngezifiso zezinhlelo zokusebenza ze-elekthronikhi I-metallized ceramics iye yasetshenziselwa kakhulu ukusetshenziswa kwezicelo ze-elekthronikhi ngenxa yokwehliswa kahle kwemishini, amandla aphikisayo, kanye nezakhiwo zamanje, ezinhle nezindlela ezinamakhemikhali. Idlala indima ebalulekile...
I-Silicon Carbide Mechanical End-Face Ceramic Seals
I-Silicon Carbide Mechanical End-Face Ceramic Seals Izitifiketi ze-ceramic zokuphela komzimba ziwuhlobo lwesitoreji esisetshenziselwa imishini eguquguqukayo, njengabaxube, amaphampu, ama-blower, i-compressor. Lapho uhlelo lwepompo lusebenza, uketshezi lwaluthola ukuphuma kwepompo phakathi kwe-shaft ejikelezayo kanye...
Ama-seal we-SiC Mechanical End-Face Ceramic
I-Diamond yokugcoba i-Mechanical Seal Face ne-Ceramic Seal Inkampani yethu inikeza iziqu zobuso be-ceramic ezihlukahlukene ezifisa kakhulu. Sisekela kusukela usayizi omncane kuya kosayizi enkulu emigqumeni yezinsiza zomphakathi, ukubonisa ukuphakama kwezidingo zamanzi emipompo yokukhiqiza kwamanzi, zonke izinto...
SSiC Ceramic Valve Seat for Sealical Seal
SSiC Ceramic Valve Seat for Sealical Seal I-silicon carbide inezinzuzo eziningana zokuphikisa okunamandla okukhulu, ukulwa nokushisa, ukulingana okuphakeme kokushisa komshini, ukuzitholela umzimba nokunciphisa ukushisa okuphansi. I-factor frictional yokuhlanganiswa kwe-silicon carbide ne-carbon graphite yiyona encane....
Al2O3 Alumina Ceramic Seal Washer Sinekhono lokusebenza ngeziqu ezinhlobonhlobo ze-ceramic, njengobuso be-ceramic, ama-disk seal seal, i-valve ye-ceramic ibhola nokuningi. Sinikeza ukukhethwa kwezinto zobuchwepheshe be-ceramic kulezi zimpawu ze-ceramic, kufaka phakathi ibanga elihlukile le-alumina, i-silicon carbide...
Izindwangu Zomshini Wokwakheka Kwama-Silicon Carbide Ring Seal Faces
Izindwangu Zomshini Wokwakheka Kwama-Silicon Carbide Ring Seal Faces Sivame ukukhiqiza ngaphezu kwamakhulu ambalwa ebusweni bomzimba we-ceramic seal nge Usayizi / design. Lezi zibonakaliso ze-ceramic zenziwe kusukela kuzinto ezibucayi ezilungiselelwe, njenge-alumina, i-zirconia, i-silicon carbide. Zisetshenziswe...
I-Diamond yokugcoba i-Mechanical Seal Face ne-Ceramic Seal
I-Diamond yokugcoba i-Mechanical Seal Face ne-Ceramic Seal Njengoba izimpawu zemishini zenzelwe izinhlobo eziningi ezahlukene. Kodwa-ke, into ebaluleke kunazo zonke uma kunqunywa ukuthi uphawu lwama-ceramic luzohlala isikhathi eside kangakanani. Namuhla, i-aluminium oxide, i-silicon carbide, ne-Tungsten carbide...
I-aluminium Oxide Ceramic O Ring Seal Ring
I-aluminium Oxide Ceramic O Ring Seal Ring I-Alumina O izikhala zomshini zingashintsha izimpawu zomshini ezikhiqizwa yi-PTFE futhi zisetshenziselwa kakhulu igesi, i-petroleum, ikhemistri, ukuhlanzwa, ukwenza iphepha, ikhemisi, amandla kanye nembonini yemoto. Sinikeze ubukhulu obuhlukahlukene obuhlukile, ukucaciswa...
I-Double Mechanical SiC Ceramic Seal Face
I-Double Mechanical SiC Ceramic Seal Face I-double mechanical seal ye-ceramic iyinhlanganisela kokubili izigxobo zokugcina eziphezulu ezibekwe emuva noma emuva, noma uphawu olulodwa oluba nombuso wokugcizelela ezinhlangothini zombili. Ubuso bombhalo we-ceramic bungaba uhlobo olulodwa oluhlanganisiwe noma lwamanzi...
Ama-Chemical Mechanical Ceramic Seal Faces
I-Aluminium Oxide Ceramic Mechanical Seal Faces for Automotive Njengoba i-aluminium oxide (i-alumina) inikeza ubulukhuni obuphezulu, ukumelana nokumelana okuhle, ukushaqeka okuhle kwe-thermal, nokuphikisana nomzimba. Lezi zici zenza i-alumina ifanele ubuso bomsakazo. Lezi zibonakaliso ze-ceramic zisetshenziselwa...
Ukuphikiswa Okumnyama 95% 99% 99.5% Ama-Alumina Seal Faces
Ukuphikiswa Okumnyama 95% 99% 99.5% Ama-Alumina Seal Faces Njengoba i-alumina inokugqoka okunamandla kakhulu, ubulukhuni, ukuzigcoba, i-aluminium oxide i-ceramic ihlale ibhekwa njengokukhetha okuhle kobuso be-ceramic ebusweni, ama-valve. Sinikeza iziqu ezihlukahlukene ze-alumina ze-alumina, kuhlanganise nama-alumina...
I-Aluminium Oxide Ceramic Mechanical Seal Faces for Automotive
I-Aluminium Oxide Ceramic Mechanical Seal Faces for Automotive Ifektri yethu inikeza ubuso obuningi be-ceramic seal, obuhloswe ukuvimbela ukuvuza phakathi kwe-shaft ejikelezayo ne-stator ngaphansi kwesimo sokushisa okuphezulu, ukucindezela okukhulu nokuvinjelwa okukhulu. Zonke lezi zinkimbinkimbi zobunxele...
I-SiC Ceramic Mechanical Seal Faces for Booster Pump
I-SiC Ceramic Mechanical Seal Faces for Booster Pump I- sliced S- ilicone carbide (SSiC) ebizwa ngokuqondile i-sub-micron silicon powbide powder ku-2100 ℃ isithando sokubamba umlilo ngaphandle kokucindezelwa. Ngoba okuhle crystal uhlaka olulodwa-isigaba salo uyakwazi ukugcina amandla okusezingeni eliphezulu ashisa...
I-Ceramic Face Seal Ring ne-Surface epholile
I-Ceramic Face Seal Ring ne-Surface epholile Uphawu lwe-silicon carbide ceramic lunikeza amandla amakhulu, ukugqoka ukugqoka, nokuguquguquka okungaphezu kwalezo ezinye izinto eziningi zobuciko zobuchwepheshe. Ubuso be-ceramic face yi-ceramic eqinile kakhulu yezobuchwephesha ezinezindawo ezinhle kakhulu ekubunzima,...
I-Disc Ceramic Sealing of Valves
Sinekhono lokuhlukahluka kwemiklamo ye-geometri ekhethekile, ama-discs we-ceramic seal wezinga elihlukile. Zonke lezi zindiza ze-ceramic seal zithuthukisiwe, zithuthukisiwe futhi zifakazelwe njengobunzima bedayimane obuphezulu obuphezulu obuphezulu obukhenyiweyo, ukusebenza okugqamile kokusebenza nokusebenza isikhathi...
I-Diamond Enziwe Alumina Ceramic Seal Disks For Pump
I-disamic seal discs, njengento eyisihluthulelo esiyisisekelo, inzuzo eningi. Ikwazi ukufaka esikhundleni se-disk yendabuko yokufaka uphawu emidini yamaphampu, i-regulators, izibhamu, i-diverters ngenxa yokulinganisa okuphelele komhlangano, ukumelana nokugqoka okungalinganiselwe, ubunzima obunamandla, ubuso obuhle...
Mechanical Seal Ceramics
I-Mechanical Seal Ceramics
Ama-Mechanical Ceramic Seal Faces
I-Double Mechanical Seal Face
I-Sand Mill Ceramics